Dzimwe iOS 11 Beta 2 Zvikanganiso uye Maitiro Ekuzvigadzirisa | IPhone nhau
Dzimwe iOS 11 Beta 2 Bugs uye Maitiro Ekuzvigadzirisa
iOS 11 iri pano, zvirinani mukati mayo yekuyedza modhi. Kubva musi wekuvhurwa kwayo tanga tichiedza yekutanga beta, uye ikozvino yechipiri. Nekudaro isu takatarisana neiyo sisitimu inoshanda iyo ichine zvakawanda zvekukwenenzvera, muchokwadi Apple inogadzira masisitimu ayo anoshanda kusvika isati yatanga inotevera. MuIOS 11 tawana mamwe matambudziko anogara achidzokororwa atichaedza kugadzirisa.
Kana iwe uri kuyedza iOS 11 Beta, kana iwe urikufunga kuzviita, shanyira ino positi kuti uone kuti ndeapi akanyanya kukanganisa, uye maitiro ekugadzirisa mazhinji acho pazvinogoneka. Isu tinonyevera kuti mabheta eIOS haakurudzirwe kuti aiswe pamidziyo inowanzoshandiswa.
Nekudaro, uye pasina kumwezve kunonoka, tiri kuenda kunonyora zvimwe zvezvikanganiso zvinowanzoitika zveaya maviri ekutanga maIOS 11 mabetas nemhinduro dzawo
Iwo mafomu ari muApp Store haandivandudze: Izvi zvinodaro nekuti iwe uchiri paIOS 11 Beta 1, iyo yaive nenyaya dzinoverengeka pamwe neyakagadziridzwa. Kuti uite izvi, kugadzirisa kuIOS 11 Beta 2, enda kuZvirongwa> Zvakajairika> Software kugadzirisa. Kana iyo yekuvandudza isingaoneke, ita reboot yechigadzirwa.
Zvemukati blockers hazvishande: Izvo chete zvemukati blocker izvo isu zvatakawana zvinoshanda neSafari yeIOS 11. Zvinotaridza kuti Apple yakanganisa nechimwe chinhu muchirongwa.
Matambudziko muApp Store yekugadzirisa counter: Iyo inoramba iri bug isina mhinduro.
Iyo kifaa inotonhora uye mashandiro ayo anoderera: Zvinogona kunge zviri nekuti bhatiri riri pazasi pe10% rinotanga kutadza
Anomalies neiyo «yakaderera kudyiwa» maitiro: Apple inoita kunge isina kumisikidza yakaderera-simba modhi zvakanaka kwazvo uye ichipfuura nekucheka simba re processor, hapana mhinduro futi.
Zvinogara zvichirova zve multitasking sarudza: Iyo inoramba iri bug isina mhinduro.
Ini handikwanise kudzosera kuIOS 10.3.2 kubva kuIOS 11 Beta 2: Iyo bug inozivikanwa, unofanirwa kurodha pasi iOS 11 Beta 1 .IPSW uye wozodhonzera kuIOS 10.3.2 uchishandisa DFU modhi.
Ini handikwanise kugadzirisa iyo Apple Watch kuBeta 2: Iwe uchafanirwa kusunungura iyo Apple Watch, kuibatanidza zvakare, kuisa chitupa uye wozoitangazve kuti uwane iyo yekuvandudza iri pabasa.
Parizvino izvi zvikanganiso zvataurwa uye kunyanya kushandisa bhatiri kunoenderana neyechipiri beta yeIOS 11, Kunyange mamwe matambudziko nezvikumbiro zvinoenderana seYouTube zvagadziriswa, asi mamwe anopfuurira, akadai sekugara kuri kuvharwa kweBankia application.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Dzimwe iOS 11 Beta 2 Bugs uye Maitiro Ekuzvigadzirisa
Uye zvinoitwa sei kuvhara mafomu kuitira kuti zvisaoneke zvakavhurika zvakare kusvikira iwe wavhura zvekare?
Chii icho chiye chekushambadzira chaunoti chinoshanda neSafari paIOS11?
Kuita tsvagiridzo, ndakaedza iyo app "Block Ad na NeverAds" uye yakandishandira.
adblock plus inoshanda kwandiri
Ndine beta 2 uye iyo yekuvandudza app inoramba ichipa kukanganisa.
Kwayedza nzira yataurwa yekuvandudza Apple Tarisa kanopfuura ka12 uye uchiri kusakwanisa kugadzirisa
Mhoroi, ndeipi nhamba yekuvaka yeBeta 2?
Mune kesi yangu ndinotambura newachi, asi handigoni kuibatanidza, ndichaedza kuibvisa uye kuiwedzera zvakare.
Panyaya yeblocker, iyo adblock plus inoshanda kwandiri
Mumwe munhu angave ane moyo munyoro kuratidza kwaunogona kurodha pasi ipsw yeiyo beta 1 yeios kuti ukwanise kudzikisira?
Ndine iyo 7 yakasungirirwa.
wakakwanisa kuzviita here?
Ini ndakafanana neipad
Ini zvakare handikwanise kudzorera kubva pa11 beta 2 kusvika gumi ios
Daniel Roiz akadaro
Kana iwe parizvino uchimhanyisa iOS 11 beta: Kune zvishandiso izvo zviripo zvine iOS 11 beta yakaiswa, unofanirwa kudzoreredza 10.3.3 beta. Dhawunirodha iyo iOS 10.3.3 beta software dzorera mufananidzo wechigadzirwa chako kubva kurodha peji.
Pindura kuna Daniel Roiz
luciano lopez akadaro
Ndinokubvunza mubvunzo ... Nhasi ndinogadziridza yangu iphone 6S kuita iOS 11. Ini dama ndokuisa zvakanaka, asi foni payakatangwazve, iko kubata kwakamira kushanda ...
Zvakaitika kune mumwe munhu here?
Pindura kuna luciano lopez
Beatrice hartz akadaro
Pandinodhawunorodha iOS 11 sisitimu inoshanda, Kamera haichaoneki pachiratidziro uye handikwanise kutora mifananidzo.
Chii chandingaite kugadzirisa izvozvo?
Pindura Beatrice Hartz
Iyo tvOS 11 yeruzhinji beta yave kuwanikwa
Apple inoshandisa Hertz kukweretesa yekuzvidzora-kutyaira bvunzo mota